Profesora Profesora Micha de Winter momba ny RTL niharan'ny fanandramana sandoka Veenendaal: ny fandaharam-potoana tena misy: Martin Vrijland
Profesora Profesora Micha de Winter momba ny RTL niharan'ny fanadihadiana nataon'ny mpianatra sandoka Veenendaal: ny fandaharam-potoana tena mandresy
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 11 Febroary 2019	• 7 Comments
Ny rotaka teo amin'ireo mpianatra sandoka tao amin'ny Christelijk Lyceum Veenendaal dia nanosika ahy hijery nandefa ny Vaomierag zoma farany tamin'ny 8 Febroary amin'ny zavatra hafa tsy mitovy. Eo am-piandohana, efa naseho ato amin'ity tranonkala ity ny haino aman-jery miaraka amin'ny sehatry ny rotaka nataon'ireo mpilalao, toy ny nandritra ny tantaram-pianakaviana Zaanse tao Poelenburg (eto part 1, part 2 en part 3) de this one Pegida / Antifa fihetsiketsehana ao The Hague, miaraka amin'ny mpitarika. Nirotsaka ny masoko tamin'ity fampielezam-peo ity, indrindra teo amin'ny avana izay nanjary nalaza teo amin'ny sary. Ny lokon'ny avana izay mijery tsara ny fasika dia marika famantarana mazava ho an'ny fandaharam-potoanan'i Luciferiana amin'ny fanabeazana. Hanazava aminao aho hoe nahoana aho no te hampiseho izany aminao ary nahoana no tena mahagaga izany.
Ary tsy misy ifandraisany amin'ny fanontaniana raha toa ka fomba mahavariana ity fiakarana ity mba hiara-hiasa amin'ireo mpilalao sarimihetsika kokoa na dia kely fotsiny aza ary avelan'ny vahoaka hampiasaina izany, ny masoko indrindra dia io symbolisme io. Ankehitriny dia hilaza ianao hoe: "Bueien Vrijland, miaraha amin'ny lohahevitra. Ny avana any am-pianarana dia tsy mahaliana". Mandra-panaoko anao ny profesora nipetraka teo ambony latabatra niaraka tamin'i Mariëlle Tweebeeke tao Nieuwsuur. Raha ny marina, te-hanondro anao aho lalao avo izay nilalao teto:
Ny fanesorana (hita maso) ny famoahana fandaharanasa fandaharam-potoana dia manafatra ny hafatra hafahafa momba ny fandaharam-potoana miafina izay tsy misy mahita anao.
Ny fisainako dia nilaza tamiko fa misy fofona amin'ireto Micha de Winter ireto. Voalohany indrindra dia teo amin'ny fifandimbiasan'ny tarehin'ny lehilahy izany, izay nanan-java-maso ny masoko. Nahazo fahatsapana kely aho fa mety mila miatrika olona iray izay tena tia ankizy (toy izany). Noho izany dia nihevitra aho fa mety hahaliana an'i Google amin'ny anaran'io anarana io izany ary izany no nahatonga ahy hivoaka tamin'ny zavatra efa noeritreretiko ho hita. Na dia toa mifanohitra amin'ny sekoly Veenendaal aza isika miaraka amin'ny 'fandaharam-potoana miafin'ny' fitantanana, dia toy ny tandindona kokoa ny marika famantarana ny tsiambaratelo.
Ny avana dia niseho tao amin'ny tantara ara-baiboly momba ny Safodrano teny an-danitra rehefa nandefa vorombe iray i Noa (koa marika manan-danja) ary nahita tany indray. Ny avana dia maneho ny fiovan'ny tanindrazana amin'ny tany vaovao. Izany, araka ny hazavaina ao ity lahatsoratra ity, ny mariky ny fanovàna avy amin'ny olombelona efa antitra mankany amin'ny vaovao. Tsy mahagaga raha ny avana dia marika ho an'ny fiarahamonina LGBTI (vakio ity fanazavana ity!). Ao amin'ny lahatsoratra maromaro no nanazavako fa ny avana dia manondro ny fiovan'ny olombelona manoloana ny finoana Lucifer sy ny governemanta manerantany, izay ahafahan'ny olombelona manjary mpanova ny maha-lahy na vavy. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny drafitra mitaona amin'ny dingana, izay ilàna adidy lehibe ny teny hoe "fanovàna" na ny hoe "trans". Izany no antony ahitantsika fanandramana goavana manoloana ny transgenderism amin'ny taona ho avy. Midika izany fa isika (ary efa nandeha nandritra ny taona maromaro izany) dia niaina fampielezan-kevitra fampielezan-kevitra lehibe izay tsy maintsy hanontaniana ny ankizy momba ny lahy sy ny vavy. Miasa saina amin'ny krizy momba ny maha-lahy sy vavy izahay. Izany dia mitaky ny ankizy ho tsapan'ny ankizy amin'ny fahatanorana, fa koa izy ireo dia ampianarina fa afaka mahatsapa ny vadinao amin'ny vatan'ny vehivavy na mifamadika amin'izay ianao.
Mahatalanjona fa io fanabeazana ara-tsosialy mpampianatra namoaka Utrecht University mpampianatra sy ny tanora indrindra HU, Nieuwsuur ny hipetraka eo amin'ny latabatra, rehefa jerena ny dikan'ilay avana subliminal saika tonga mifantoka maharitra ao amin'ny dinidinika miaraka amin'ny ankizy. Mika de ririnina raha ny marina dia mpiara-nanoratra ny boky momba ny ankizy sy ny firaisana ara-nofo. Andeha hojerentsika hoe inona io boky io:
Ity boky ity dia mirakitra ny fomba fijery ara-tantara momba ny firaisana ara-nofo ataon'ny ankizy sy ny tanora. Avy amin'ny vanim-potoana manjombona Victoriana, manomboka amin'ny enimpolo taonan'ny taonjato 20 ka hatramin'izao. Ireo mpanoratra folo dia nahazo ny PhD amin'ny psikology, anthropologie, biolojia na pedagojy. Izy rehetra dia nikarakara ny toko iray. Miaraka amin'ny lohateny toy ny The End of the Taboo on Sexuality, Boys, Girls and Sexuality, In ny vatana mangatsiaka, Tanora, kolontsaina sy firaisana ara-nofo ary fanabeazana momba ny firaisana: asa na fanamby? Ny toko tsirairay dia manomboka amin'ny sary manaitra na sary. Misy latabatra sy grafika sasantsasany, fijerena literatiora sy fampahalalana mikasika ny mpanoratra. Ity fanambarana manaraka avy amin'ny toko farany ity dia maneho ny fomba fisainan'ny mpanoratra: 'Aoka isika tsy hanao fanabeazana ara-pananahana lehibe kokoa noho ny, ampahany amin'ny fanabeazana ankapobeny.' Azo ampiasaina ho boky fianarana ho an'ireo mpianatra matihanina matihanina eo amin'ny sehatry ny psikology sy ny fianarana. Fa mahaliana ihany koa ho an'ny mpampianatra matihanina sy ny ray aman-dreny manana tombontsoa mihoatra ny antsasak'ity lohahevitra ity.
Noho izany ireo ray aman-dreny izay variana ankehitriny amin'ny antsoina hoe mivadi ny zanany dia anisan'ny karazana fandaharana fahitalavitra RTL miafina, ray aman-dreny no taitra anie bebe kokoa momba ny miafina fandaharana nametraka fandaharana izay any an-tsekoly amin'ny alalan'ny fampiofanana ny mpampianatra ny. Ny dingan'ny indoctrination ny tanora no mifehy ity karazam-mpampianatra, izay tena mitana toerana lehibe eo amin'ny ezaka ho sexualization sy ny lahy sy ny vavy mitondra ny tanora very fanantenana. Ny zava-drehetra eo amin'ny fampitana izany ny teny 'zava-miafina' ary tsy nampahafantatra ny mpianatra sy ny ray aman-dreny. Azo atao ve ny dingana lehibe kokoa marina izany!?
Diniho ny endrik'ilay teny hoe 'sexuality' amin'ny alalan'ny fampielezam-peo ny Nieuwsuur. Tandremo ihany koa ny fomba fijerin'ny tatitra momba ny fanadihadiana any amin'ny sekoly amerikana ny teny hoe 'manova'. Ny 'ara-batana' sy ny 'fitondran-tena' dia mandalo foana. Famantarana mazava momba ny fandaharam-pianarana subliminal.
Azonao atao ny manja ny sorokao. Gender in kivy ny fijeriko fanahy iniana nanosika, satria fiaraha-monina toy ny soanambo ho vonona ho amin'ny firaisana ara-nofo revolisiona izay tokony mba ho azo antoka fa ny taranaka manaraka manaiky fa isika dia hamokatra ny ankizy lahy sy ny vavy-tsy miandany amin'ny alalan'ny fananahana izay ihany no voafehin'ny ny fanjakana. Ny ankizy izay hitombo ho olon-dehibe miaraka amin'ny izao tontolo izao izay ny lahy / vavy hevitra toy ny ara-dalàna dia heverina (ary miaraka amin'ny fananganana bio-tany taloha) dia vonona amin'ny dingana manaraka amin'ny evolisiona: ny transhuman. From transgender to transhuman; Izany no fandaharam-potoana (araka ny hazavaina ity lahatsoratra ity). Ny tanora dia ny ho avy sy iza no brainwash ny tanora amin'ny avana fandaharam-potoana, tsy ho ela dia manana taranaka izay hitany fa tena ara-dalàna fa ny fanjakana ho ara-dalàna ihany no fandikana sy ny lahy sy ny vavy-tsy miandany ny ankizy teraka. Avy eo isika manakodiava tsikelikely ho any amin'ny dingana manaraka ny fandaharam-potoana, izany hoe ny transhumanisering mety hitranga. Lehilahy toy ny cyborg ao amin'ny tambajotra mifehy ny foibe; tao anaty rahona.
Ny fandaharana fahitalavitra miafina dia mety tsy hohadinoina, fa ny programa miafina an-tsokosoko dia voasolotena amin'ny tarehinao. Ary tsy misy mahita azy! Ity Micha de Winter ity dia toa mitana toerana lehibe eo amin'ity fandaharana miafina ity izay tokony hampahafantarina ny mpianatra sy ny ray aman-dreny! Moa ve isika nijoro vavolombelona tamin'ny famoahana fandaharana fahitalavitra miafina iray mba handraketana ny fandaharam-pitsokom-piraketana miainga amin'ny olona tahaka an'i Micha de Winter? Ny fandaharam-pampianarana Luciferiana marina izay anovana ny tanora hanoloana ny transhuman transhuman, amin'ny alàlan'ny fomba famafazana fialantsiny momba ny maha-lahy sy maha-vavy (programming). Sokafy ny masonao dieny mbola tsy tara loatra ary vonona ny fanandevozana ho an'ny fanandevozana nomerika eo ambany fitondran'ny governemanta Luciferiana! Iza no manana ny ho avy?
Ary inona moa ny hafatr'ireo mpilalao sarimihetsika "zokiolona" izay mitady tanora sy mifangaro amin'ireo tanora mpiara-mianatra (ary miresaka momba ny firaisana ara-nofo amin'izy ireo)? Eritrereto ny taratasy tsy hita ao amin'ny teny hoe LGBTI: ny taratasy P.
Lisitry ny rohy loharano: npostart.nl
Tags: nandatsaka, agenda, miafina, Micha ny ririnina, to bully, avana, RTL, am-pianarana, ara-pananahana, miafina, veenendaal
11 Febroary 2019 ao amin'ny 14: 00
Mbola iray amin'ny Club, hey. Toetra ara-tsosialy foana, Terrible. Tsy mandre feo manohitra ianao satria tsy misy fanoherana eto amin'ity firenena ity. Miova avy hatrany ny fitondrana.
elvedeha nanoratra hoe:
11 Febroary 2019 ao amin'ny 14: 36
Mino aho fa ny teny hoe pedo dia nosoratana tamin'ny P ... eny, ny taratasy dia hatsaraina tsy ho ela.
11 Febroary 2019 ao amin'ny 15: 11
Ny antony lehibe tokony hieritreretana hoe ray aman-dreny mba haka ny zanakao amin'ny toeram-pisakafoanana ary tsy dia miankina amin'ny rafitra.
11 Febroary 2019 ao amin'ny 16: 03
Ny Ivontoerana ho an'ny Teknolojia ao Brookings dia hametraka tontolon'ny fifanakalozan-kevitra momba ny ho avin'ny AI any amin'ny faritra metropolita, mifantoka amin'ny AI ho fitaovana fampidirana vaovao, fandrindrana ny serivisy, ary fanatsarana ny fanapahan-kevitry ny mpitarika.
11 Febroary 2019 ao amin'ny 16: 54
Ianao taloha hametraka ny fanondrony amin'ny, na fotsiny ny tananao ... ankehitriny nanindrona antsy ny ankizy (anisan'izany Arie "aho ka mamy sy ny lalàna tonga lafatra" Boomsma 32 :. 45 min) ny Luciferian tanana fihetsika (jereo ny 24: 12 min.): Pink sy fanondroana rantsantanana, rantsantanana eo anelanelany
Tahaka izany fandaharam-pampianarana mahatalanjona izany fa misy ny fahatsapana momba ny fampijaliana, saingy ny dingana roa dia ny hoe "mitovy daholo" ary izany dia ny fandaharam-potoana voafaritra ao amin'ny lahatsoratra etsy ambony, voahodidina jakatra tsara.
11 Febroary 2019 ao amin'ny 20: 14
Izany no tsy nanahirana an'i Arie, ilay filoham-pitoriana teo amin'ny lalana ... fombafomba fotsiny no holazaintsika 😀
11 Febroary 2019 ao amin'ny 20: 20
ary mazava ho azy fa ny fanazavana momba ny hany real LaVey (Levi) dia tsy azo tsinontsinoavina ...
« Ireo mpianatry ny fihetsiketsehan'ny klioban'ny demokrasia dia manaporofo fa ampy
Tsia, tsy miaina amin'ny solosaina solosaina 'avy any ivelany' isika: manaisotra an'izany tsy misy dikany izany »
Total visits: 8.545.926